Home News Ku tagrifalka Tuutaha Ciidanka oo ruwaayad laga sameeyay (Video)
Ku tagrifalka Tuutaha Ciidanka oo ruwaayad laga sameeyay (Video)
Waxaa waayahan dabne ku soo badanaysay masraxa siyaasada isticmaalka dharka tuutaha oo ay istcimaalaan ciidamada qalabka Sida ee Soomaaliya. Waxaa gaar ahaan si sharaf ka dhac ah u istcimaalo RW Xassan Cali Kheyre oo dastuur ahaan ay mamnuuc ka tahay in uu gashado dharka tuutaha madaama uusan ahayn taliyaha ciidanka ama uusan ciidan horay u soo noqon.
Admiral Faarax Axmed Cumar “Faarax Qare” Taliyihii hore ee Ciidanka Badda iyo rugcaddaa ka tirsan ciidamada, isaga oo arrintaasi ka hadlayo waxaa uu yiri“Sharciga iyo dhaqanka aan arki jiray kuma jirin, kutubta aan soo arkay kuma jirin. Dharka ciidanka, keliya ciidan ayaa qaadan karo”.
Col Ruush ayaa yiri “dharka u gaarka ah ciidanka waxaa qaadan karo oo kali ah qof ciidan ah soo maray ama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah madaxa ciidanka Xooga Dalka Soomaaliy”.
RW Kheyre oo aan wax uu ka xishoonayo jirin ayaa waxaa uu saaystay dhar Tuute ah oo uu ku qortay magaciisa. Taliye ka mida ciidanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa yiri “ dhaqan xumida RW Kheyre waxaa ay dhaawacday niyadda ciidanka, dharkii ciidanka ayuu ka dhigtay wax uu ku shaqo tago, waligiis ciidan ma noqon, ciidan wax badan kama yaqaano waxaa uu no arkay aalad loo isticmaalo in la isku sawiro
”Col. Sharif Roobow oo xilligii dowladdii dhexe ka tirsanaa xoogga dalka oo isna arrinkan ka hadlayo waxaa uu yiri“Dharka ciidanka waa darajo la helo, in la iska labisto waa qalad, waxaan u fahmay is-tus tus, looma baahna showgaas, waxaan arkey wasiirro labisanaya, wuxuu rabaa inuu dadka tuso inuu (opration)howlgal ku jiro, taasina waa qalad, wasiirka shaqadiisa Operation ma aha, waa jago siyaasadeed, waa inuu habeeyo ciidanka, xuquuqdooda siiyo, lana xisaabtamo”.
Koox fanaaniin ah oo ka dhiidhinaysa sida loogu ciyaaray dharkii qiimaha lahaa ee ciidanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka sameeyeen ruwayad kooban oo cabiraysa dhaqan xumida RW Kheyre.
Previous articleCiidamada Maamulka Hirshabeele oo Xabsiga Dhigay Suxufi ka Howlgala Magaalada Baladweyne
Next articleXarigga 14 Askari oo ay Qooraxdu Tuutaha kula qallajisy iyo in Dembigii Weerarka Wasaaradaaha lagu Wareejiyaa ma Garbaa?
Safiirka cusub ee Dowladda Ingiirska usoo magacawday Soomaaliya oo Madaxweyne Farmaajo...
Sheekadaan Kala wareeg oo Laba shacb ah oo reer Muqdisho dhibaateysan...